२०२० मा १०+ सर्वश्रेष्ठ टिभी स्ट्रिमिंग सेवाहरू - मनोरञ्जन
स्ट्रिमिंग आजको समयको एक उत्तम मनोरन्जन हो, योसँग छ प्रतिस्थापन सेट-शीर्ष बक्सहरू र ती सबै विशाल केबल कार्य गर्दछ तर अब तपाईंलाई केवल एउटा सानो उपकरण चाहिन्छ, र तपाईं जान तयार हुनुहुन्छ, साथै यो अधिक सुरक्षित छ र तपाईंलाई क्युरेट गरिएको सामग्री दिनेछ जुन तपाईंलाई हेर्न मनपर्दछ।
त्यसोभए, हामीले तपाईंलाई केहि उत्कृष्ट टिभी स्ट्रिमिंग सेवाहरूको उल्लेख गर्न विस्तृत सूची तयार गरेका छौं। त्यसो भए अब सर्वश्रेष्ठ टिभी स्ट्रिमि services सेवाहरूको सूचीमा आउनुहोस्।
२०२० मा सर्वश्रेष्ठ टिभी स्ट्रिमिंग सेवाहरू - शीर्ष सूची
तिमीले यो आउँदै गरेको देख्यौ। यो अहिले उपलब्ध उत्तम स्ट्रीमिंग सेवा हो। मासिक शुल्क तुलनात्मक रूपमा कम छ जब यसको अन्य प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा। यस सेवाको सबै भन्दा राम्रो फाइदा यो हो कि तपाईं तिनीहरूलाई एल्गोरिदमहरू तपाईं तिनीहरूलाई प्रदान प्रदान सामाग्री देखाउँदछ। Shows ..5 को आईएमडीबी रेटिंगको साथ ब्रेकि Bad खराब, 8..8 को आईएमडीबी रेटिंगको साथ अपरिचित चीजहरू, आईएमडीबी IM..6 को आईएमडीबी रेटिंगको साथ मिन्डहन्टर जस्तै उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू मध्ये एक। यी सबै शानदार कार्यक्रमहरू स्ट्रिमिंगका लागि नेटफ्लिक्समा उपस्थित छन्।
तपाईं एन्ड्रोइड, एन्ड्रोइड टिभी, र म्याक / आईओएस / एप्पल टिभी मार्फत सेवा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। नेटफ्लिक्स तपाईंको लागि एक पैसाको लायक हुनेछ। यसका साथै उनीहरूका मौलिकहरू अहिलेका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनहरूमध्ये एक हुन्। तिनीहरू मध्ये धेरैले गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पाएका थिए। नेटफ्लिक्स भनेको गुण भन्दा बढी गुण हुनु जस्तो हो। कूल संख्या शीर्षकको साथ चलचित्र र कार्यक्रमहरू ,,665। हो।
यहाँ नेटफ्लिक्सको मूल्य निर्धारण योजना को ब्रेक डाउन छ:
आधारभूत योजनाएक स्क्रीन संग:$।
मानक योजनादुई स्क्रीन संग:$ १।।
प्रीमियम योजनाचार स्क्रीन संग:$ १।।
२ अमेजन प्राइम भिडियो
यो मात्रा पक्षमा अधिक छ र टिभी कार्यक्रमहरूको एक विशाल चयन प्रदान गर्दछ। यो नेटफ्लिक्सको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी हो। यो 'cured' सामग्री तिर एक फरक दृष्टिकोण छ; यो IMDB रेटिंग को माध्यम बाट सामग्री फ़िल्टर गर्दछ र तपाईंको मुडमा आधारित छ। मलाई के स्पष्ट रूपमा मनपर्दछ भन्न दिनुहोस्, खुशी, दु: खी, केहि कार्य चाहनुहुन्छ, थ्रिलर, तपाइँ आफ्नो मुडमा आधारित सामग्री फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
यस स्ट्रिमि service सेवामा पनि धेरै विकल्पहरू छन्। यद्यपि तपाईले तिनीहरूलाई नेटफ्लिक्स जत्तिकै सन्तोषजनक देख्न सक्नुहुन्न। मूल्य कम छ, र यसको सबै भन्दा राम्रा शीर्षकहरू the..6 को पारिवारिक म्यान आईएमडीबी रेटिंग, पेटल लुक 7..8 को आईएमडीबी रेटिंगको साथ, मिर्जापुर .5. IM को आईएमडीबी रेटिंगको साथ, टम क्लेन्सीको: ज्याक रेयान .5..5 को आईएमडीबी रेटिंगको साथ। कूल संख्या अमेजन प्राइम भिडियोमा शीर्षकहरूको २०,392२ हो।
अमेजन प्राइम भिडियोको लागि वार्षिक सदस्यता $ for for लागत।
3 डिज्नी +
बच्चाको रूपमा डिस्ने फिल्म मन पराउँछन्? यो तपाईका लागि उत्तम विकल्प हो। यस सेवामा जहिले पनि प्रत्येक डिज्नी चलचित्र समावेश गर्दछ। हिउँ सेतो देखि एभेंजर्स सम्म, डिज्नीले प्रदान गर्ने सामग्रीको सीमा छैन। यसको नकारात्मक पक्ष भनेको त्यहाँ केहि कम शोहरू वा चलचित्रहरू हुन सक्छ जुन तपाईंले हेरेको छैन। यो गहिराइ हिड्ने मेमोरी लेन जस्ता छ।
जहाँसम्म डिज्नी नयाँ हो, उनीहरू अझै थप शीर्षकहरू लिन खोजिरहेका छन् उनीहरूको शीर्षकमा some.7 को आईएमडीबी रेटिंगको साथ मन्डोरोरियन, .4..4 को एभेन्जर एन्डगेम आईएमडीबी रेटिंग, oy..3 टोय स्टोरी--आईएमडीबी रेटिंग। शीर्षकको कुल संख्या 7००० एपिसोड र movies०० चलचित्र हो।
डिज्नी को लागी योजना को लागी $।।।।। को लागी लागत।
H. HBO अधिकतम
HBO अधिक स्पष्ट सामग्री र व्यक्ति जो केहि फरक कुरा मन पराउँछन्। यस स्ट्रिमि service सेवामा उत्कृष्ट शीर्षकहरू गेम अफ थ्रोनेसआईएमडीबी rating। Of को रेटिंग, hern.ob को चेरनोबिल आईएमडीबी रेटिंग, .1.१ को वाचम्यान आईएमडीबी रेटिंग, wor..1 को वेस्टवर्ल्ड आईएमडीबी रेटिंग हो। सामग्री एकदम राम्रो छ, तर सबैजनालाई यो मनपर्दैन। यद्यपि तपाई आफ्नो भाग्य कोशिस गर्न चाहानुहुन्छ र यो तपाईको स्वाद अनुसार मिल्छ कि भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ
यस गर्मीमा सबै भन्दा धेरै प्रतीक्षित जस्टिस लीगको प्रीमियर HBO म्याक्समा हुनेछ ताकि चीजहरू HBO को लागि आशाजनक देखिन्थ्यो। शीर्षकहरूको कुल संख्या २००० हो।
HBO योजनाहरू worth १.8२..8 / वर्षको मूल्य हुन्।
सबै कार्यक्रमहरू अमेरिकाको संस्कृतिमा आधारित छन्, तर तिनीहरूको गल्लीमा केही राम्रो कार्यक्रमहरू छन्। जस मध्ये केहि ब्रूकलिन आईएमडीबी .4. of को नौ नौ आईएमडीबी रेटिंग्स हो, यो आईएमडीबी :.7 को ग्रेडीको शरीर रचना आईएमडीबी रेटिंग हो: आईएमडीबी 7..6 को ग्रेटि एनाटोमी आईएमडीबी रेटिंग। यी कार्यक्रमहरू हुन् जुन तपाईं हराउन चाहनुहुन्न। जे होस्, यी केहि शो हो जुन तपाईं अनौपचारिक रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ र एउटा आकर्षक कथानक चाहनुहुन्न।
यो HBO जस्तो छ, तपाईं आफ्नो भाग्य प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ सामग्रीको साथ जुन तपाईंलाई मनपर्न सक्छ वा न मनपर्न सक्छ। यदि तपाईं आरोन पलको प्रशंसक हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई यो सेवा मनपर्नेछ; अन्यथा, यो आफैलाई स्थापित गर्न सक्दैन। शीर्षकको कुल संख्या 43 43,००० भन्दा बढि छन् (यो दाबी गरे जस्तै)।
Hulu को लागी मूल्य $ 71.88 / वर्ष हो।
फ्ल्यास, ग्रीन एरो, कालो बिजुली ठिक छ, यो तपाईंको लागि उत्तम स्ट्रिमि streaming सेवा हो। सबै डीसी नायकहरू यो प्याकेजमा समावेश छन्। धेरै जसो जीवनको लागि सुपरहीरो ल्याउन शहर वरिपरिको बज प्राप्त गरेका छन्।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो कुनै सदस्यता वा ईमेल ठेगाना आवश्यक छैन हेर्न स्वतन्त्र छ।यदि तपाईं भित्री गीकको अन्वेषण गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले सीडब्लूलाई एक चोटि प्रयास गर्नुपर्दछ। उपलब्ध शीर्षकको कुल संख्या is० हो।
सदस्यता लागत:CW लागत को सित्तैमा छ।
Apple. एप्पल टिभी +
एप्पल टिभी + सँग कार्यक्रम र चलचित्रहरूको एक राम्रो संग्रह छ। D. IM को आईएमडीबी रेटिंगको साथ हेर्नुहोस्, मार्निंग शो आईएमडीबी 8. of को रेटिंग, टेड लास्को आईएमडीबी 8..7 को रेटिंग। ती दुबै कार्यक्रमहरूले तपाइँको दिमागलाई लामो समयसम्म समात्दछन् र देखाउँछन् जुन केवल आकस्मिक अवलोकनका लागि हुन्।
जस्तै ती बजारमा नयाँ छन्, तिनीहरूसँग सीमित संख्यामा कार्यक्रमहरू छन्, तर तिनीहरूको गुणवत्ता पनि छ। सिनेमाटोग्राफी एक उत्कृष्ट हो जब यसको अन्य प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा। शीर्षकहरूको कुल संख्या is 45 हो।
पहिलो वर्ष एक पारिवारिक सदस्यता संग नि: शुल्क छ, वा तपाईं विद्यार्थी प्रस्ताव को लागी अप्ट-इन गर्न सक्नुहुनेछ र केवल $ ०.1१ / महिनामा एप्पल संगीत संग नि: शुल्क दावी गर्न सक्नुहुन्छ।
एनिम एक विधा जुन सबैले देखेका छन्। ड्र्यागन बल z यस बारे सुनेको? कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंको खानाको अर्डर भएको छ र तपाईंको घरको आरामको साथ एनिमेसलाई बिंग्दै छ। यो सपना क्रन्चीरोलको साथ साँचो हुन सक्छ। यो वेबसाईटमा एनिमेसको सब भन्दा ठूलो संग्रह छ जुन प्रस्ताव गर्नुपर्‍यो।
नारुतोदेखि डेथ नोटमा, तपाईंले सोच्न सक्नुहुने हरेक एनिमे तिनीहरूको लाइब्रेरीमा उपस्थित हुनेछ। तपाईंले एनिमे हेर्नेबारे विचार गर्नुपर्छ। यो अप्रयुक्त मनोरन्जनको पूर्ण नयाँ संसार हो। शीर्षकको कुल संख्या हाल १०००+ हो।
क्रन्चिरोल विज्ञापनका साथ पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ, तर तपाइँ विज्ञापनहरूबाट अप्ट-आउट गर्नको लागि $ 7.99 / महिना तिर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंलाई टक शो मनपर्दछ भने, यो प्लेटफर्म राम्रो छ आज रातको जिमी फालनसँग .3..3 को आईएमडीबी रेटिंगको साथ। सबैजना टक शो र केजुअल सामग्री मन पराउँछन्, जसले हामीलाई हाम्रो दिमागलाई तान्न र झुकाउन आवश्यक पर्दैन। परिवार संग रमाईलो समय मयूर संग रमाउन सकिन्छ।
तपाईंले प्रीमियम विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ किनकि तिनीहरूले तपाईंको स्क्रिनमा प्रत्येक पाँच मिनेटमा विज्ञापन शुट गर्न रोक्दैनन्। तपाईंले प्राप्त गरेको शिर्षकहरूको कुल संख्या +०+ हो।
मयुरको मूल्य विज्ञापन संग सित्तै हो, तर तपाइँ विज्ञापन free स्ट्रीमि experienceको अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ भने $ १०० / वर्ष तिर्न सक्नुहुन्छ।
१०. YouTube प्रिमियम / टिभी
यूट्यूब भिडियो प्लस जुन हो YouTube को प्रीमियम सामग्री । यूट्यूबसँग शो र मूलका बिभिन्न किसिम छन् जुन तिनीहरूसँग विशेष छ। तर त्यहाँ त्यस्तो कारण छ जुन हाम्रो सूचीमा यति कम स्थानमा छ। यो किनभने सुरक्षा स्तर अपेक्षाकृत कम छ, र मानिसहरूले सामग्री एकदम प्रभावशाली पाइरहेका छैनन्।
तपाईं यस सम्झौताको लागि बाहिर रहन चाहानुहुन्छ। जे होस्, तपाई tit.7 को IMDB रेटिंगको साथ कोब्रा काई जस्ता शीर्षकहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ, .5. with को IMDB रेटिंगको साथ स्टेप अप हाईवाटर। तर यी जस्तो शीर्षक अब नेटफ्लिक्स द्वारा परिचित भएको छ।
यो सँग एक निःशुल्क परीक्षण छ। यसको लागत $ ११.99 / / महिना छ।
मलाई आशा छ कि तपाईले हाम्रो पोष्ट पढेर सबै भन्दा राम्रो स्ट्रिमिंग सेवाको स्पष्ट दर्शन पाउनुभयो। उत्तम विकल्प अमेजन प्राइम भिडियो वा नेटफ्लिक्सको लागि अप्ट-इन हुनेछ किनकि एक गुण हो, र अर्को परिमाण हो। त्यहाँ कुनै घाटा छैन, किनकि ती दुबै मध्यम-स्तरमा आउँदछन् जहाँ लागत सम्बन्धित छ। यदि तपाईंसँग यस सूचिमा कुनै थप सुझावहरू वा add-ons छन् भने यसलाई टिप्पणी बक्समा ड्रप गर्नुहोस्।
नि: शुल्क चलचित्र स्ट्रिमि S साइटहरू (२०२०)
ट्विच च्याट लगहरू कसरी जाँच गर्ने?
१२3 चलचित्रहरू अनलाइन नि: शुल्क स्ट्रिमि।
वेबसाइट आईफोनमा नि: शुल्क टिभी कार्यक्रमहरू हेर्न
कोडहरू Xbox प्रत्यक्ष सुन नि: शुल्क प्राप्त गर्न
के म कसैको नेटफ्लिक्स खाता प्रयोग गर्न सक्छु?
लाइनमा क्लासिक टिभी हेर्नुहोस्